Gqoka ukumelana nokukhishwa kwe-zirconia ipulam China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > Ama-Tuber Ceramic > I-Zirconia Tube ye-Ceramic > Gqoka ukumelana nokukhishwa kwe-zirconia ipulam
Gqoka ukumelana nokukhishwa kwe-zirconia ipulam
Ukukhiqiza: 10,000 sets/month
I-Zirconium ceramic pulley guide ihlale isetshenziselwa ucingo olugqinsiwe noma intambo yosilika olufanele, ingxenye yezinhlobo ezahlukene zemishini yokugubha kanye nemishini ye-textile. I-polishing level of groove ingakwazi ukuphakamisa i-Ra0.2 noma ngaphezulu, Kulolu hlelo lokusebenza, i-Ceramic pulley ihambelana nama-bearings aphezulu, ukuqhuma emaceleni omabili kungavimbela ucingo oluxhunyiwe ngaphandle kwe-slot, kanti ukuhlukumezeka okunamandla kungahlala njalo .
Izinto zikhonjiswa emshinini wamakhemikhali amakhemikhali ngaphambi kokuphenya futhi emva kokuhlunga kwe-spinninge ne-A95, i-A99, i-alumina engineering ceramics ne-titanium oxide i-wire guide device kanye namaplastiki we-engineering, kufaka phakathi ikhanda elikhanda ikhanda -rabbit, i-tube tube chuck, ibhulogi yocingo lenethiwekhi, ukungena kwesihlabathi esihlungi kanye nesibhamu sensimbi yokulonda.
- Ubunzima obuningi kunezingxenye ze-al2O3 ze-ceramic guide
-Ukuphikiswa kwesimo: Ukulungisa inkinga yokuhlunga kahle kunoma yikuphi ukuzungezwa okunzima, ukumelana nokushisa kwamakhemikhali e-zirconia oxide kakhulu kakhulu kunensimbi.
-Ukukhanya okuphezulu: Kulula kakhulu ukuphothula ubuso bokusebenza ukuba kube nomphumela omuhle, bese usiza ukunciphisa ukuxabana okuningi futhi wandisa impilo yokusebenza.
Imikhiqizo isetshenziselwa kakhulu kagesi, i-electronic, yamakhemikhali, izitimela, imishini ye-textile, umshini wokukhipha imishini yamakhemikhali, umshini kanye nemishini yekhebula, ama-burners, imishini yokudoba, i-Tin Machine, umshini wokudweba ucingo, ukwakhiwa, amafutha kanye nezimboni ze-aerospace ezindaweni eziningi.
I-Mirror Epholile i-Alumina Ceramic Seal Face
I-Zirconium Oxide Ceramic Pulley